Shaxda Dharka Warshadda - Soosaarayaasha Shaxda Dharka Shiinaha, Alaab-qeybiyeyaal
Muraayadda YF-T19 Madoobaadka laab laab
Dusha sare wuxuu leeyahay seddex qaybood oo leh muraayad is-dul-sarraysa qaybta dhexe. Wareeg is-rog-rog ah oo ku yaal dhinac kasta oo wax-qabadku wuxuu bixiyaa meel fara badan oo lagu keydiyo qurxinta ama musqulaha.
YF-T13 Muraayad sare oo Muraayad ah Muraayad Muraayad Sare Sare
Waxaa lagu sifeeyay nadiif, jilicsan miisaska iyo lugaha qalooca, qalabkan qurxinta casriga ahi wuxuu u dhigmaa kursi qurux badan iyo muraayad aad u fiican oo kaamil ah si uu u muujiyo shakhsiyad sharaf leh! Iyada oo dhammaystiran dahabi dhalaalaya iyo muraayad wareegsan, qaybtani waxay bixisaa naqshad indho qabad leh.
JF-T7 Shaxan Macan Faanid Muraayad Weyn & Gole Wasiiro & KhaanadTribigns Shaxda Macmacaanka Waxtarka
Naqshadeynta qaabka gaarka ah, waxay la timid wax aan waxba tarayn, muraayad dhalaalka hagaajinaysa, saxar barkimo leh iyo qabanqaabiye qurxiyo oo bilaash ah. Wax aan waxba tarayn ayaa leh laba khaanad oo waasac ah oo qaadi kara waxyaabaha muhiimka ah ee aad u baahan tahay iyo dahabka. Miiskan waxtarka leh iyo saxarada ayaa loo isticmaali karaa qolkaaga jiifka, musqusha, armaajada ama wadiiqada.
JF-S1 Oak Shaxda Waxtarka Faqash
Waxaa naga go'an inaan abuurno miis jilicsan oo wax ku ool ah oo aan ku siineyno xulasho wanaagsan. Jadwalka miiska qurxinta cad waxaa laga sameeyay qalab tayo sare leh si loo hagaajiyo xasiloonida iyo adkeysiga 100%…
Wax aan waxba tarayn oo Muraayadda Taabashada Taabanaysa
Laba khaanadaha wax lagu kaydiyo ayaa leh meel burushyada, qurxinta, qoyaanka iyo waxyaabo kale oo badan.
Naqshadaynta giraanta Humanized waxay sahleysaa beddelashada khaanadda.
YF-T24 golaha dahabka GANACSIGA GANACA
Naqshadeynta asymmetrical oo leh xariiqyo nadiif ah, iyo midab cad & cagaar ah waxay gurigaaga ku siinayaan muuqaal quruxsan oo qurux badan.
YF-T23 Khaanadaha waaweyn Qurxinta Waxtarka + golaha wasiirada TV-ga
Waxyaalihii aan waxba tarayn ayaa u shaqeynaya sida TV-ga oo muraayadda Flip Up dusha laga saaray.
Waxqabadka badan-Waxaa jira boos ku filan qurxinta maalinlaha iyo timo jarista oo leh 2 Khaanado & 4 shelf. Miiska sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa inuu noqdo istaandarka TV-ga
YF-T22 qurxiyo macaan + shaqeynaya golaha wasiirada
Miis madhan oo bir ah oo cadcad oo dhalaalaya iyo saxaradu way fududahay in la barbar dhigo qurxinta gurigaaga, miiska miiska waxaa ku jira dhammaystir cad oo lagu kabayo saldhigga trestle ee dahabka.
YF-T21 dhalaalka Weyn ee Isku-qurxinta Weyn + Waxyaabaha Taagan TV-ga
Qalabka waxtarka leh waa mid shaqeynaya sida TV-ga oo leh muraayadda LED-ka dushiisa. Dharkaan casriga ah, casriga ah ee leh saxarada u dhiganta ayaa ah xulashada qolka jiifka casriga ah.
YF-T20 Waxyaabaha Qurxinta Weyn + TV-ga golaha wasiirada
Qalabka wax-u-qabadka waa mid shaqeynaya sida TV-ga oo leh muraayadda LED-ka dusheeda.
Miis madhan oo dhalaalaya oo saafi ah oo qaab xarago leh iyo saxaradu way fududahay in lala barbardhigo qurxinta gurigaaga Miiska ballaadhan wuxuu leeyahay boosas badan oo abaabulayaasha yaryar, dhirta, ama koob burush ah.
YF-T18 wuxuu ku siinayaa wax aan waxba tarayn oo jilicsan
Dhismaha birta, marmar faux, alwaax adag iyo maqaar PU waxay xaqiijineysaa taageero adag, adeegsi waara iyo waayo aragnimo raaxo leh sanadaha soo socda. Miiskaan oo leh khadad nadiif ah, dhameyn muraayad ah, iyo Hollywood Mirror ayaa dhigay meelo awood leh, hadana qurxoon, makeup Istaag gurigaaga dhexdiisa.
YF-T17 ku habboon meelaha yar yar Miisaska Waxtarka
Jadwalka Qurxinta Faan-yarida ah oo lagu dhejiyay Muraayad Brightness Muraayad, Saxaro barkin iyo Qabanqaabiye Bilaash ah. Waxaad ku dooran kartaa iftiin kala duwan iyadoo loo eegayo muuqaallo kala duwan iyo qurxiyo kala duwan.